Mamwe eakanakisa Wiricheya Hacks | Karman® Mawiricheya
Kuva mune wiricheya ingaratidzika kunge inonetsa pakutanga, asi nekufamba kwenguva unozotanga kuchinjika kune izvi mararamiro matsva. Tatsvaga zvimwe zve wiricheya yakanakisa hacks zve parwendo, kubika, uye zvimwe zviitiko zvezuva nezuva.
Ita shuwa kuti iwe une muridzi wefoni, cheya cheya inobatana nemabhatiri edu echeya (kana cheya isiri yemagetsi, chimbofunga kudyara muchaja inotakurika), uye cheya cheya yakasungirirwa kuseri kwechigaro.
Masutukesi ane mavhiri anotenderera, izvi zvinokutendera iwe kusunda uye dhonza sutukesi inby mubato pane chero kona.
Mawebhusaiti senge seatguru anogona kukubatsira kunyorera zvigaro zvako pane ndege. Ivo vane zvigaro zvekugara kune akawanda ndege dhizaini.
Bhedha Inobatsira Tambo inogona kukubatsira maneja mukati nekunze kwemibhedha yausina kujaira. Iyo ine akati wandei akavakwa mumabato, senge tambo mubato.
Chengetedza mafambiro ekupedzisira ramp nzendo refu dzemugwagwa. Izvi ramp ndivo akaita yekabhoni fiber inogadzira yakasimba asi yakajeka! Vamwe vanokwanisa kubata mazana mapaundi vachingorema mapaundi masere.
Chengetedza mari pamatafura. Ivo vakagadzikana uye kufambidzana nzvimbo dzekugadzirira. Unogona kusanganisa mumabhodhoro madiki uye uzvidzivirire kana uchifambisa zvinhu zvinopisa zvakaita semapani uye mabheka ekubheka. Izvi zvinogona zvakare kukubatsira iwe kutakura zvinhu zvakakomberedza kicheni sezvingaite tereyi.
Shandisa midziyo midiki kuti zvinhu zvive nyore kubata uye kuvhura. Midziyo midiki inogona kuve yakasununguka kushandisa.
Zipties dzinogona kushandiswa kutenderedza firiji uye makabati kuwedzera kusvika kwako kana iwe usingakwanise kugadzirisa kicheni yako.
Asina Slip dhirowa liners inochengetedza zvinhu kubva kufamba kana kutsvedza zvakapoterera. Izvi zvinoderedza njodzi yako ye kuipa kana uchisvika pazvinhu zvakaoma kusvika kunzvimbo.
Batanidza makiyi kana pini dzekuchengetedza kune zipi kuti ikubatsire iwe zip jaketi uye mabhegi.
Bata marambi, ayo ari marambi ayo chete kuda a kapombi kapfupi kana kubata kubatidza, kudzima, uye kugadzirisa. Unogona kugara uchisungirira tambo kudhonza marambi asi marambi ekubata anogona kubatsira kana uine mashoma kumusoro kufamba apo uchiri kunakidza panguva imwe chete.
Zvinonhuwira matanda anogona kuita kuvhenekera kenduru iri nyore basa zvakare kana iwe uine mashoma dexterity.
Mapurasitiki epurasitiki anogona kubatsira zvakanyanya kune vanhu vazhinji vakaremara mumuviri. Semuenzaniso, vashandisi vechairchair vanogona kuvashandisa kuchengetedza chigaro chavo checheya mumvura.
Chengeta kana kubatanidza tochi yakanaka kana Kufamba don nzira dzakasviba dzekujekesa nzira yako uye kubatsira kudzikisa mukana wekurwiswa kamwe kamwe.